What is the TOP Amazon keyword tools?
Kana iwe usati uri mutsva muEcommerce world, pamwe wakacherechedza kuti hazvina kukwana kuisa zvigadzirwa zvako uye kumirira kutengesa, kunyanya mumakwikwi ekukwikwidza akadaro seAmazon. Iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti wakaita zvose zvingaita kuti uwane maitiro uye mitsva yekubhadhara mitsva. Kunyange kana iwe uri mugadziri uye zvinhu zvepamusoro zvekutengesa zvekugadzira kwako, hazvisi pachena kuti iwe unogona kutenga vatengi vanozviona pane yakazara Amazon search results page. Ndicho chikonzero iwe unoda kunzwisisa zvido zvekuda kwevateereri vako uye unowana mazwi anonyanya kukosha ayo vatengi vangashandisa kuwana zvigadzirwa zvaunotengesa - moving commercial bins. Haisi basa rakanyanya kuita zvitsvakurudzo. Zvisinei, kune dzakawanda zvezvesheni uye dzinoshanda maIkhikey keywords kuongorora zvishandiso zvinogona kuita kuti basa iri rive nyore uye ikubatsire pakunzwisisa zvaunoda shopper. Zvishandiso izvi zvingakubatsira iwe kukudziridza maAmerican marketing strategy kuburikidza nemitemo yakasiyana-siyana yakadai semadzinza ehurumende, tsvaga yevhesi yemashoko ako ekutsvaga, kushandura-kuburikidza nehuwandu, nzvimbo dzepamusoro, uye nezvimwe zvakadaro. Paunokwanisa kutarisa nzvimbo dzako, iwe unokwanisa kugadzirisa marashiro ako ekudhinda uye kuita zvose zvinoda kuchinjwa munguva.
Ndicho chikonzero kupedza nguva yakawanda kutsvakurudza mazwi enyu akavakirwa uye kugadzirisa Amazon maintries, zvichakuunza kudzoka kwakakwirira pane zvikwereti uye kuwedzera kutengesa. Saka, regai tinyatsotarisisa maAmerica makuru ezvigadzirwa zvinyorwa zviripo pawebhu.
The best quality Amazon keyword tools
uye zviri nyore kushandisa paIndaneti platform iyo iri kuita zviuru zveAmerica zvinowedzera kugadzira kutsvaga kuwana mazwi akafanana ausina kumbofunga iwe pachako. Inoshanda zvakasiyana nedzimwe mazwi ekutsvakurudza mashandisi sezvo asingatauri pahupamhi. Mutengesi wezvesayenzi anozviti ndiye nyika inononoka zvikuru izwi rekushandisa. Zvisinei, izvi zvakasiyana-siyana zvinofanira kufanirwa sechibatsiro panzvimbo pekushaya simba sezvo ichiita shanduro yakazara yemusika, kutsvaga mberi nekure kure nembeu mazwi. Iyi purogiramu inopa Amazon shopper keywords chete, kuongorora kushandiswa kwemashandisirwo emuAmerica uye mamwe maitiro anokosha. Vanounganidza keyword mazano kubva pane zvakasiyana-siyana zvinosanganisira Latent Semantic Indexing (LSI). Chinobatsiro chikuru chechigadzirwa ichi ndechekuti inogona kupa zvisinganzwisisiki, marefu-misi mhiye wekuti iwe haugone kuwana manzwi. Sonar
Sonar iGoogle Chrome inowedzera iyo inopa Amazon vatengesi vane mazano anokosha mazano kubva tsvaga tsvakurudzo dzakagadzirwa nevechokwadi maAngosisi vese Iyi shandiswa inoshandisa shanduro yakagadziriswa kuti ione zvinonzi Amazon shoppers iri kutsvaga uye inounganidza mashoko ekutsvaga mu database. Zvakakosha kutaura kuti Sonar inosanganisira chete mazwi ekutsvaga ayo ASIN inotarisa pane imwe yekutanga Amazon search results page. Inopa mukana wakaisvonaka wekuwana mazwi makuru ayo chero ipi zvayo yakapiwa ASIN iri kuunza zvizhinji zvekutengesa. Zvisinei, zvakakosha kutaura kuti haufaniri kuvimba neiyi Amazon keyword tsvakurudzo yekuongorora kuongorora data.